LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ 76394 Fawkes, Dumbledore ၏ Phoenix ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
16 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 z ဇရ Wexler 353 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၉၇၉ Hedwig, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, Albus Dumbledore, Dumbledore, Fawkes, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Hedwig, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စနစ်, Lego Technic, Majisto, reviews, စံနစ်, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group
76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် ရန်အပေါ် swoops Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီနွေရာသီမှာမြင်ကွင်းကျယ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အကျော်ကြားဆုံး Wizarding World အစုံများထဲမှတစ်ခုကိုယူပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအံ့သြစရာတည်ဆောက်နိုင်သော, တောင်ပံ - ခတ် ၇၅၉၇၉ Hedwig မော်ဒယ်လ်သည်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရပေမည်၊ 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်။ သော, ဒါမှမဟုတ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အဖွဲ့သည်ဘီးကိုပြန်လည်တီထွင်ခြင်းမပြုဘဲတန်းစီ။ အမြန်ဆုံးထပ်မံရှာဖွေနေသည်။
တစ်နည်းနည်းဖြင့်, 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်သိသိသာသာသတ်မှတ်ထားသော ဦး ခေါင်းကြောင့်၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်သိသိသာသာ ပို၍ ကြည့်နိုင်သည်art။ မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် display ကိုဖွင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပိုနည်းတဲ့သူအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဝယ်ချင်ရင်ဟယ်ရီပေါ်တာ ထက် 'ပန်ကာLego playset ပန်ကာ 'ဒီအစုသည်ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါသည်။ Plus အားသီးသန့် Dumbledore အသေးစားရုပ်ပုံသည်သဘောတူညီမှုကိုချိုစေသည်။ ဒါကိုအုတ်တွေထဲမှာဘယ်လိုပုံသွင်းထားသလဲကြည့်ရအောင်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့မစတင်ခင်မှာ Fawkes, Dumbledore's Phoenix ဆိုတဲ့နာမည်ကဘာလဲ။ ဂိမ်းထဲမှာအခြား Fawkeses အားလုံးဆန့်ကျင်? သူတို့မခေါ်ကြဘူး ၇၅၉၇၉ Hedwig 'Hedwig, Harry's Owl' ။ အသေးအဖွဲအချက်တစ်ချက်၊
theme: Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 34.99 / $39.99 / € 39.99 အပိုင်းပိုင်း: 597 အသေးစားပုံများ: 1
အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego အထူးသဖြင့်လိုင်စင်ရသည့်အခင်းအကျင်းတွင်သေတ္တာမှအရောင်များနှင့်ပေါက်ကွဲစေသည့်အစုံ ဟယ်ရီပေါ်တာ ၎င်းသည်အများအားဖြင့်အသံတိတ်သောဘရောင်းများ၊ လူမည်းများ၊ မီးခိုးရောင်၊ 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် မျက်လုံးဖမ်းစားသောအနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်လိမ္မော်သီးတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်သည့်ရပ်တည်ချက်ကိုတည်ဆောက်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအိတ် မှလွဲ၍ အားလုံးလက်ခံနိုင်စရာကောင်းသည်။ ၏တောင်မှအမြောက်အများ နည်းပညာ partကိုက်ညီသောကိုက်ညီသောအရောင်များဖြင့်ဖော်ပြသည်။
အမှန်တကယ်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် p နှင့်အတူပျော်စရာကောင်းပြီးကွဲပြားခြားနားသည်artအစဉ်မပြတ်မျိုးစုံလမ်းညွန်နှင့်သင်တန်း၏သွား နည်းပညာ အတောင်ပံ - ခတ် function ကိုများအတွက် interwoven bits သည်။ သင်တစ် ဦး နက်ရှိုင်းသောအသိပညာခံစားရနိုင်ပါတယ် Lego p အပေါ်ဂျီသြမေတြီart အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ကြည့်ရသည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလေထန်သည့်ရပ်တည်မှုနှင့် System p ရှိသည့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်arts ကိုချောမွေ့စွာပတ်ပတ်လည်တပ်ဆင် နည်းပညာ.
သင်တည်ဆောက်ပြီးပါက ၇၅၉၇၉ Hedwigတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် Lego déjà vu သည်တောင်ပံများတူညီစွာဆောက်လုပ်ထားသောကြောင့် - 1 × 1 qu ၏ပုံစံအထိဖြစ်သည်arter ပတ်ပတ်လည်အုပ်ကြွပ်။ ခတ်ခြင်းယန္တရားသည်တူညီသည်၊ ရပ်တည်မှုတွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိသော်လည်းအချို့သောရှုထောင့်များသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကွဲပြားသောအစီအစဉ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Fawkes သည်အဆုံး၌ Hedwig ထက်သာလွန်သည်။ Hedwig သည် Semi- ရယ်စရာကောင်းသော googley မျက်လုံးများရှိပြီး Fawkes သည်အရောင်အသွေးကြောင့်စင်ပေါ်တွင် ပို၍ ထင်ရှားသည်။
ဒီဇိုင်းပညာအရအမှားဘာမှမရှိပါဘူး 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် ရပ်တည်ချက်ကနေအမြီးမှ ဦး ခေါင်းမှ။ မော်ဒယ်တစ်လျှောက်အရောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အဓိကအနီရောင်သည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်လိမ္မော်ရောင်များဖြင့်အစက်အပြောက်များ၊ အနီညိုရောင်နှင့်ခြယ်သထားပြီးအဝါရောင်နှင့်အဝါရောင် - အဝါရောင် - လိမ္မော်ရောင်အောက်ခံများရှိသည်။
Chima ၏ Legends ကတည်းက, Lego ဒီဇိုင်နာများသည်အနုစိတ်သတ္တဝါများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံပိုများလာသည်။ Fawkes ၏ ဦး ခေါင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး p ကိုအမျိုးမျိုးအသုံးပြုသည်artအလွန်ခေါင်းဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန် s နှင့်အရောင်များ။ အသစ်သောကြီးမားသော 'မက်ကာနီ' အပိုင်းအစသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနီရောင်ဖြင့်လည်ပင်းတွင်ကောင်းစွာအသုံးပြုသည်။
မကြာခဏနှင့်အတူမော်ဒယ်များကပ်သောပြproblemနာတစ်ခုမှာ နည်းပညာ အရောင် - သော့ခတ်သေးငယ်တဲ့ p ရှိနိုင်ပါသည်arts, အပြာရောင်နှင့် tan တံသင်များနှင့်အတူလက်များနာနေသည့်လက်တံများကဲ့သို့ကပ်နေသည်။ အပြာတစ်ဝက်ဝက် ၀ င်ရိုးတစ်ခုတည်းသည်အတောင်ပံအောက်တွင်မြင်နိုင်လောက်အောင်မမြင်နိုင်သည့်အပြင်မော်ဒယ်၏ထိပ်ရှိမြင်နိုင်သောအဝင်ရိုးများသည်အဝါရောင်ဖြင့်ပေါ်လာသောကြောင့်သူတို့တတ်နိုင်သလောက်အလွယ်တကူကိုက်ညီနိုင်သည် (အနီရောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း) ပိုကောင်းတယ်) ။
kinetic function ကိုကြည့်ရင်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး crank ကိုဖွင့်ပြီးတောင်ပံများလှုပ်ရှားပုံကိုကြည့်ရတာပျော်စရာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဒီအစုကိုအများဆုံးထားလေ့ရှိပေမယ့်သင်ဟာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ် guests ည့်သည်တွေဆီကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်နိုင်ပါတယ်၊ ဖြိုချပြီးဘယ်လောက်အေးအေးဆေးဆေးပြနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ Lego ထိုခတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဂီယာအုံသည်အတောင်ပံများကိုအပေါ်ဘက်အနေအထားဖြင့်ထိန်းထားနိုင်သဖြင့်သင့်တွင်ပြသနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။
2018 မတိုင်မီကအခါ Lego အုပ်စုသည်မြုံထိုးသွင်းခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဘ ၀ သစ်နဲ့ဆောင်ပုဒ်၊ Lego-y မဟုတ် - စartရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်လှိုင်းနှုန်းအတွက် icularly- တိကျမှန်ကန်သော Dumbledore ဒီဇိုင်း။ သူ၏မျက်နှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးသူ၏မုတ်ဆိတ်ကို ၁၉၉၃ တွင်၎င်းအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည် Lego Group ၏ In-house Wizard, Majisto ။
ဒါကမဆိုဆိုလိုသည်မဟုတ် Lego Dumbledores သည်မကောင်းသောဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်သူ၏ဖက်ရှင်စရိုက်များကိုအစောပိုင်းရုပ်ရှင်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်artDumbledore ဒီဇိုင်းများကိုလေးနက်စွာခံစားခဲ့ရသည်။ ကောင်းပြီ၊ Dumbledore ဒီဇိုင်းများမှထွက်ပေါ်လာသောပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိုပြproblemနာကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ လှိုင်းလုံးသည်ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ခြောက်ခုအထိရှိသည်။
သူ၌သာသီးသန့်ဝတ်ဆင်သောအင်္ကျီ 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် သူ၏ရုံးခန်းရှိမြင်ကွင်းများတွင်တွေ့ရသော Fawkes နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသူတို့ကိုလျောက်ပတ်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ Dumbledore သည်သူ၏ ဦး ထုပ်ကိုပျောက်နေသည်။ သူသည်ဒုတိယ Potter ရုပ်ရှင်၌ပုံမှန်အားဖြင့်ဝတ်လေ့ရှိသည်။
၀ တ်စုံအပိုင်းအစအစား standard minifigure ခြေထောက်များကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်မထူးဆန်းပါ။ ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, ကုလားထိုင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်) ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Dumbledore သည်စုဆောင်းသူများသို့မဟုတ်အပြီးသတ်သူများ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုအတွက်အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းကောင်းမွန်လှသည်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဗားရှင်းများသည် ပိုမို၍ အမှတ်ရစရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောကြားမှာရှိနေသည်။ သူက Fawkes ကိတ်မုန့်ကိုအေးခဲနေတယ်။
£ 597 များအတွက် 34.99 အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ / $39.99 / € 39.99, 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် p ကိုကြည့်တာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်art တစ်ယောက်တည်းရေတွက် ၎င်းတွင် element များထက်အနည်းဆုံး ၃၀ ပါဝင်သည် ၇၅၉၇၉ Hedwig၎င်းသည်အရွယ်အစားတူညီပြီးထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သောကြောင့်ဈေးနှုန်းတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဒီနွေရာသီ 2021 လှိုင်းအတွင်း, Fawkes နှင့်အတူစျေးနှုန်းမှာယှဉ်ပြိုင် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံဒါပေမယ့်နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ kinetic display model တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခုလုံးကို Hogw သို့ထပ်ထည့်နိုင်သည်arts သို့မဟုတ်ကစားအတွေ့အကြုံကိုကစား။ ဒါကကျနော်တို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် အားနည်းချက်များစွာရှိသည် နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ, စဉ်တွင် 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် တော်တော်များများအားနည်းချက်တွေကငျးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအနေနှင့်၊ စျေးနှုန်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Fawkes display အပိုင်းကို ဦး စွာလိုချင်ပါက။
နှစ်သက်ဖွယ် 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် တရား ၀ င်ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ထင်မြင်ယူဆချက်အရကြည့်ရှု့ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတိုင်းသည်။ ၎င်းသည် Fawkes နှင့် display ပေါ်တွင်မျက်စိဖြင့်ဖမ်းစားခြင်းများကိုချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဤအခင်းအကျင်းမှအခြား set များထက်များစွာပိုမိုကြီးမားသည်။
Dumbledore ၏ထူးခြားသောအဝတ်အစားနှင့်ထူးဆန်းနေဆဲ Fawkes အပိုင်းအစတွင်အဓိကဆွဲဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားထားပြီးဖြစ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သည့်အစုကို ပို၍ ပင်တန်ဖိုးထားစေသည်။
Dumbledore's Phoenix, LEGO Harry Potter 76394 Fawkes ကိုဆောက်လုပ်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
တည်ဆောက်ရန်တစ်နာရီခန့်ကြာသည် 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်, ဒါပေမယ့်သင်ဖို့အကျင့်ကိုကျင့်လျှင် နည်းပညာ မျှမျှတတပါဝင်သည်အဖြစ်ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်ပိုရှည်။
Lumbo Harry Potter 76394 Fawkes တွင် Dumbledore's Phoenix တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
597 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်သီးသန့်အဝတ်အစားတစ်ခုတွင် Dumbledore အသေးစားနှင့်အသေးစားပုံအရွယ်အစား Fawkes အပါအ ၀ င်ဒုတိယ Wizarding World ၏အခြားနေရာများ၌သာတွေ့နိုင်သည်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
Dumbledore's Phoenix LEGO Harry Potter 76394 Fawkes သည်မည်မျှကြီးသနည်း။
Dumbledore ၏အဓိကရပ်တည်ချက်ဖြစ်သော Fawkes တွင်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုမရေတွက်ပါ 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် အရှည် ၁၈ စင်တီမီတာ၊ ဦး ခေါင်းမှအမြီးမှ ၂၄ စင်တီမီတာ၊ တောင်ပံမှအတောင်မှအစွန်အဖျားအထိ ၃၅ စင်တီမီတာရှိသည်။
Dumbledore's Phoenix LEGO Harry Potter 76394 Fawkes ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် ယူကေတွင်ပေါင် ၄၄.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ နှင့်အီးယူမှယူရို ၄၉.၉၉ မှစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီဈေးနှုန်းကအတူတူပါပဲ ၇၅၉၇၉ Hedwig ပြီးခဲ့သည့် နှစ်မှစ၍ ၎င်းသည်အဓိကယန္တရားနှင့်အရွယ်အစားအပါအ ၀ င် attribute များစွာကိုဝေမျှပေးခဲ့သည်။
← Lego ဖြစ်ခဲ့သည် Star Wars'' ဂျီဒီဒီဘော့နီးပါးဒုတိယပွဲမှာပါ
Lego Star Wars ဒီဇိုင်းနာများ - 'မင်းက prequels အစုံတွေပိုလိုချင်ရင် 75309 Republic Gunship' ကိုဝယ်ပါ →